Zanu-PF Yokumbira Musangano neAmerica paNyaya yeZvirango
Sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika VaKindness Paradza veZanu-PF vanoti vakakumbira musangano nemutauriri wedare reHouse of Representatives muAmerica Amai Nancy Pelosi.
VaParadza vaudza Studio 7 kuti vari kukumbira musangano uyu kuti vazeye nyaya yezvirango zvakatemerwa dzimwe nhengo dzeZanu-PF kusanganisira mutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nevamwe vatungamiri muhurumende yavo.
Hatina kukwanisa kubata mutauriri waAmai Pelosi kuti tinzwe divi ravo. Asi VaParadza vanoti tsamba yavakanyora haisati yapindurwa.
Kunyangwe hazvo Zimbabwe iri kutsigirwa nenyika dzemuSADC neAU kuti zvirango zvibviswe, America iri kuramba yakatsika madziro ichiti Zimbabwe inofanira kutanga yagadzirisa nyaya dzekodzero uye kuvanduza mitemo inodzvinyirira vanhu.
America yakatemera yakatemera vakuru veZimbabwe ava zvirango muna 2003.